Nhau - Iyo yekuvhura mhemberero yeMersen Zhejiang Co, Ltd. yakaitwa munaNovember 5th masikati
Mhemberero yekuvhura yeMersen Zhejiang Co., Ltd. yakaitwa munaNovember 5th masikati
Mhemberero yekuvhura kweMersen Zhejiang Co., Ltd. yakaitwa munaNovember 5th masikati. The Deputy Secretary uye County Chief weChangxing County Yiting Shi vakapa hurukuro.
Mukutaura kwake, Yiting Shi akataura kuti kukura kwaChangxing kunogara kuchida shumba yekutamba, iine kuzara kweshungu nesimba, sezvo tichigara tiine hunhu hwe "kuzarura pachena" uye kutaura nenyika uye nekukudziridza zvinoshingaira. Kunyangwe takakanganiswa neCOVID-19 uye zvimwe zvinhu gore rino, isu takachengetedza kutsunga kwedu uye takaita kuyedza kukuru kudzikisira kukanganisa. Mumakota matatu ekutanga, zviratidzo zvehupfumi zveChangxing zvakatarisana pamberi muZhejiang dunhu uye Huzhou guta. Zvirongwa makumi matatu nemasere zvekudyara kwekunze zvakatangwa, ndokuwana madhora ekuAmerica mazana maviri nemakumi manomwe emadhora semari yekunze. Zvichakadaro huwandu hwekunze hwakawedzera 31%
Yiting Shi akadaro mumakore achangopfuura, nechinangwa chekuvandudza dunhu rine yakanakisa bhizinesi nharaunda muChina, Changxing yakaedza zvese kugadzira dunhu repasi rese, rakanyoreswa zviri pamutemo uye nyore. Iyo inoteedzana yakwezva mijenya yemhando yepamusoro mapurojekiti kumba nekune dzimwe nyika, senge Mersen, Clarios uye Geely. Zvakare Changxing akarima akanakisa emabhizinesi emunharaunda nemari inopfuura CNY mabhiriyoni zana, senge Tianneng naChaowei. Changxing icharamba ichivandudza nharaunda yebhizinesi ine mari inoreruka uye kutengeserana, kukwikwidza kwakaringana uye mabasa ehurumende anoshanda mune ramangwana Ichashandira kugadzirwa kwaMerson nekushanda nemoyo wese, zvinove zvinobatsira Mersen kuve anotungamira pasi rese anotengesa mafiyuzi emaindasitiri. Changxing yaizopa masevhisi epamusoro-soro uye anoshanda kana mabhizimusi aMersen akadzika nekudzika akagadzika muChangxing, iyo yaizosimudzira budiriro yeketani yemabhizimusi uye ikava sumbu remabhizimusi nekukurumidza sezvazvinogona.
Mersen Zhejiang Co., Ltd. inochengetwa nekambani yeFrance yakanyorwa, iyo ine jekiseni kuumbwa muchina, CNC michina yepakati, yekugadzira tambo, punch, lathe, yepasirese radial azvikuya muchina uye zvimwe zvigadzirwa uye zvekubatsira michina. Mushure mekupedza chirongwa ichi, zvidimbu zvemamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu zvezvinhu zvemagetsi zvinogona kugadzirwa gore rega rega, uye huwandu hunofungidzirwa hwegore rose hwakakomberedza CNY mamirioni zana ayo anokunda CNY mamirioni 11.2 semubhadharo uye CNY 10.14 mamirioni semari.